काभानीको २ गोलसँगै उरुग्वे ‘अन्तिम आठ’ मा, निराश हुँदै रोनाल्डोको टिम घर र्फिता ! – Everest Dainik – News from Nepal
काभानीको २ गोलसँगै उरुग्वे ‘अन्तिम आठ’ मा, निराश हुँदै रोनाल्डोको टिम घर र्फिता !
मस्काे । रुसमा जारी विश्वकप फुटबलमा स्टार खेलाडी रोनाल्डोको टिमलाई हराउँदै उरुग्वे अन्तिम आठमा पुगेको छ । गएराती भएको खेलमा उसका लागि एडिन्सन काभानीले उत्कष्ट प्रदर्शन गर्दै उरुग्वे अन्तिम आठमा पुग्न सफल भएको हो । खेलको सातौं मिनेटमा गोल गर्दै काभानीले अग्रता दिलाएका थिए ।
तर, ५५ औं मिनेटमा पेपेले गोल गर्दै पोर्चुगललाई बराबरीमा फर्काएका थिए । तर फेरि काभानी चम्किए । बराबरी भएको सात मिनेटमै उरुग्वेले उनको गोलमा अग्रता लियो । त्यसपछि थप दवाव बढाए पनि उरुग्वेका डिफेन्डरसामु पोर्चुगलको केहि चलेन । समूह चरणमा कुनै गोल नखाएको उरुग्वेले यो खेलमा पनि उत्कृष्ट बचावट ग¥यो । समूह ए को विजेता उरुग्वेले बी को उपविजेता पोर्चुगललाई ४६ वर्ष पछि भएको भेटमा निराश बनाएर घर फर्कायो ।
उरुग्वेले सन् १९३० र १९५० मा विश्वकपको उपाधि जितेको थियो । सन् १९८६ मा विश्वकपमा अन्तिम १६ को फरम्याट लागु भए यता उरुग्वे पाँच पटक अन्तिम १६ मा पुगेको थियो । तर यसअघिका चार पटकको अनुभव त्यति राम्रो छैन । सन् २०१० मा क्वाटरफाइनल पुुगेको थियो भने तीन पटक नकआउट चरणबाटै बाहिरिएको थियो । सन् १९८६, १९९० र २०१४ मा भने अन्तिम १६ भन्दा अघि जान सकेको थिएन ।
उरुग्वे विश्वकपमा लगातार चार खेलमा जित निकाल्दै दोस्रो पटक यो करामत गर्न सफल भएको हो । यसअघि उसले सन् १९३० को विश्वकपमा चार खेल जितेको थियो । पोर्चुगलको भने विश्वकपमा नकआउट चरणको पुरानै नियतीले निरन्तरता पाएको छ । कप्तान क्रिष्टियानो रोनाल्डोले अहिलेसम्म विश्वकपको नकआउट चरणमा गोल गर्न सकेका छैनन् ।
यो विश्वकपमा चार गोल गरिसकेका रोनाल्डोको उरुग्वेसँग पराजित भएपछि गोल्डेन बुट र देशलाईै विश्वकप जिताउने सपना अधुरै भएको छ । सोचीको फिस्ट रंगशालामा स्पेनसँगको खेलमा ह्याट्रिक गरेका रोनाल्डोका लागि नकआउट चरणमा भने यो रंगशाला पनि फापेन । -एजेन्सी
ट्याग्स: Fifa world cup 2018, Porcugal